Fadlan ii sheeg Sababta aan u nuugo! | Martech Zone
Fadlan ii sheeg Sababta aan u nuugo!
Khamiis, Juun 21, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Waan jeclahay ujeedooyinka. Waxaan si gaar ah u jecelahay hadafyada markaan aniga naftooda dejiyo Dabayaaqadii sanadkii hore waxaan dejiyay hadafkeyga oo ah inaan jabin doono 5,000 oo ah calaamada Technorati sanadkii 2007. Tan waxaa u sii dheeraa qaar yoolalka kale ee aan dejiyey. With the exception of my health (I really need to lose weight), I've demolished every goal that I've set for myself, in addition to my Technorati Rank.
Mawduucaydu miyay dib u dhacaysaa?
Mawduuca ayaan ka tegayaa?
Miyaan si caadi ah u nuugaa?
I would also love to hear what you miss about my blog that was remarkable before but hasn't been lately. If you're shy and don't want to comment in public, feel free to use boggeyga xiriirka. My ‘fame and fortune' seem to be coming primarily from my WordPress Plugins, not the other content on the site. That's a little disconcerting since I do quite a bit of research on my topics each day.
Jun 21, 2007 at 10: 41 PM
Marka, Doug, marka ay tahay inaad ka mid noqoto 5-ta ugu sarreysa Technorati, maxaa xigi doona, adduun-weynaha? 🙂
Waana tan waxaan u maleynayay in 10,000-ka ugu sareeya uu noqon doono hadaf fiican 🙁
Jun 22, 2007 saacadu markay ahayd 6:41 AM
Top 5 ayaa hubaal ka dhigi lahaa maalintayda! 10,000 sare waa hubaal wax lagu faani karo. Si daacad ah ugama fiirsado tirada dhabta ah - kaliya waa soo fiicnaaneysaa. Beryahan dambe gadaal ayey u socotey sidaa darteed waan ka walaacsanahay.
Labadayaduba waan iska sii wadaynaa Shaki kuma jiro inaad dhaqso ii dhaafi doontid!
Jun 21, 2007 at 10: 21 PM
Waxaa laga yaabaa inaad garaacday caqabadda lixda bilood ah.
Technorati waxay tirineysaa oo keliya xiriiriyeyaashii lixdii bilood ee la soo dhaafay, marka taasi waxay ka dhigan tahay si darajadaadu ay u sii kordheyso waxaad u baahan tahay inaad had iyo jeer ka sarreysid xaddiga isku xirnaanta ee aad helaysay lix bilood ka hor.
Waxaan ogaaday in arrimuhu runtii gaabis noqdeen intii u dhaxeysay 1900-2100… ka dibna 1450-1900 ay si dhakhso leh u socdaan.
Ka dib waan ka bukooday dhammaantood 🙂
Jun 22, 2007 saacadu markay ahayd 6:46 AM
Waxaan filayaa inaad saxsantahay Eng! Waan sii wadi doonaa. Xogta guud ee guud (oo ay ku jiraan hits) sidoo kale waa yar yar yihiin sidoo kale. Waxaan ka aqriyay boggaga sida Problogger in si fudud lagu daro qoraalo dheeri ah waxay sameyn kartaa farqiga.
Waan necbahay inaan kaliya qoro boosteejo dartiis, in kastoo. Waan ogahay inuusan taa kula talinaynin, laakiin taasi waa waxa ay noqon karto. Waxaan jecelahay in aan ka fikiro in aan ku darayo qiime aysan dadku ka heli karin meel kale. Marwalba waxaan kujiraa raadinta unique wax gaar ah oo ay adagtahay in la helo!
Jun 25, 2007 at 4: 58 PM
Waxay u egtahay inaad heshay waqtigii xagaaga!
Waxaan ku raacsanahay in sii haysashada Technorati ee 6 bilood ay u badan tahay inuu yahay dambiilaha.
Jun 22, 2007 saacadu markay ahayd 2:30 AM
Waxaan u maleynayaa inaad bixiso isku dhaf wanaagsan oo dhejisyo ah oo aad si fiican u sameysay si aad uga gudubto bartilmaameedyada aad dejisay. Kaliya waan sii wadi lahaa fiilada.
In badan oo ka mid ah baloogyada internetku waxay ku dhuftaan balastarro aan dhaqdhaqaaq badani ka jirin. Taas waan ku ogahay barteyda. Lambarradayda macaamiisha ayaa labanlaabmay 6-dii bilood ee la soo dhaafay, laakiin taraafikada dhawaanahan si joogto ah ayey u sii socdeen, darajadayda Technorati-na waxay ku dhegan tahay calaamadda 100K. Laakiin taasi ma yareynayso xiisaha aan u qabo qorista.
Runtii waan ku raaxaystaa daabacaadda iyo qorista maqaalada waana sii fogaan doonaa. Waxaan isku dayaa inaanan diirada saarin tirakoobyadan maalmahan laakiin way fiicantahay in la dejiyo bartilmaameedyo sida aad samaysay oo kale.
Waxaan arkay qaar ka mid ah dadka wax qora ee internetka wax ku qora inay leeyihiin guul aan caadi ahayn dhowr bilood gudahood markay billaabeen baloog taasna waa wax weyn in la arko, laakiin inteena badan, waxay u baahan tahay dadaal badan sannado badan si loo arko soo noqosho dhab ah.
Taladaydu waxay noqon laheyd sii wadista qorista barta. Haddii aad ku qanacsan tahay inaad waxaas sameyso markaa ha joojin.
Jun 22, 2007 saacadu markay ahayd 6:43 AM
Waxaan jeclahay hubkaa, cuncun! Fursad uma lihi inaan joojiyo mar kasta oo ugu dhakhsaha badan. Kaliya waxaan rabaa inaan hubiyo inaan wali idinla wadaagayo macluumaad qaali ah dadoow!
Waan iska sii wadi doonaa
Jun 22, 2007 saacadu markay ahayd 7:09 AM
Ma nuugtaa! Waxaan ogaaday in taraafikada, xiriiriyeyaasha soo galaya, iyo macaamiisha cusubi ay mowjado ku socdaan. Waxaad soosaaraysaa waxyaabo qiimo leh oo sii wadi doona inaad fiiro gaar ah u yeelato. Waxaan sharad in saddex toddobaad waxaad la yaabi doontaa sababta aad u qoray this post!
Jun 22, 2007 saacadu markay ahayd 8:18 AM
Mahadsanid, Pat! Waxaan u maleynayaa inaan dareemay amni yar. Dadweynow waxaad isu badaleysaan koox taageero weyn ah!
Sidoo kale, waxaan ogaaday inaan ahay illaa # 41 on Todd Iyo Awoodda '150 Blogs' Blogs. Cajiib! Wax yar ayaan halkaas ka booday!
Jun 22, 2007 at 2: 13 PM
Qayladaydu waxay noqon kartaa wax yar dhicis! Waan hubiyey oo API-ga ayaa kusoo celinaya qiime ka duwan darajadayda marka loo eego websaydhka! Waxay u muuqataa inaan jabiyay 2,000! Waxaan ku tuuray dadkii wanaagsanaa ee Technorati si aan ugu wargaliyo inay wax qaldan yihiin.
Jun 22, 2007 at 6: 21 PM
Hi Doug, oo haa weli waan noolahay. Culeys badan kuma saareyo tirooyinka eexda sida Technorati jecel inay u adeegto. Tirakoobyadooda si fudud ayaa wax looga qabtaa micnahoodana kuma lahan dunida dhabta ah. Waxaan diirada saari lahaa tirooyinkaaga dhabta ah waxkastoo miisaanka aad isticmaaleyso ah. Kaliya ku sii wad qorista waxyaabaha wanaagsan markasta oo ROI ayaa soo gali doonta.
Kaliya hal kormeer. Waan ogahay inaad raadineyso taraafikada shirkadaha, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ka fiirsato iftiinka sawirkaaga wax yar. Waxaad ogaan doontaa in Seth Godin, Steve Rubels (iyo Bloke Blokes 🙂 ay ku sii socdaan wadadooda si ay u soo bandhigaan sawir ka fudud oo qalbi furan. waa baaq xukun iyo wax aad ka fiirsan karto inaad tijaabiso.
Sida cuncunku yidhi, qaarkood waxay ka dhigaan kuwa ugu sarreeya soonka. Laakiin iyagu badanaa waa daneystayaal ku guuleystey inay ku ciyaaraan nidaamka, ama ay ku xiriireen liiste ka caawiyay iyaga jidka. Laakiin inteena kale oo aan u samaynayno si daacad ah waxay u baahan tahay waqti iyo dadaal badan.
Ku sii wad bro.
Jun 25, 2007 at 5: 33 PM
Mahadsanid, Bloke! Taasi waa talo fantastik ah! Waxaan haystaa xulashooyin aad u yar, laakiin waxaan hubaa inaan fiirin doono cufis yar!
Aad baan ugu faraxsanahay inaad sifiican u shaqeyneyso!
Jun 26, 2007 at 5: 58 PM
Oo maskaxda ku hay in waqtiga oo dhan baloogyada cusub lagu daro liiska. In kasta oo tiradaada guud ay waxyar hoos u dhici karto, haddana wadarta tirooyinka wali waxaad tahay kan ugu sarreeya x%
Ka dibna waa inaad tixgelisaa qofka bartilmaameedkaagu yahay. Baloog tilmaamaya waxyaabo kooban oo takhasus gaar ah leh ayaa si dabiici ah u yeelan doona fursad wanaagsan oo lagu helo dhagaystayaal badan. Si kale haddii loo dhigo, runtii way tirinaysaa halka ay qiimeyntaadu taagan tahay marka la barbar dhigo baloogyada kale iyo boggaga ku saabsan suuqgeynta iyo tikniyoolajiyadda.
Kayd ahaan ahaan, waxaad marwalba isticmaali kartaa cinwaanada cinwaanada ka kooban tixraacyada ilaa xubnaha jirka dumarka;)
Sii wad shaqada wanaagsan oo dhoola cadeynta.